Tsy handroso mihitsy isika raha ohatr’izao foana. Tena mila fanabeazana be ny fampandrosoana ny Malagasy. Efa napetraka ny lalàna momba ny sarety entin-tanana fa ny eo ihany no eo. Ny resaka tsena sy fivarotana amoron-dàlana moa, dia tena lasa resaky ny moana sy ny marenina ny an’ny mpitantana sy ny entina satria tsy te hahalala lamina sy lalàna izany intsony ny mpivarotra amoron-dalana. Ny olom-pirenena rahateo moa manjifa eny amin’ireny, ka samy tsy manara-dalàna, hany ka mahazo vahana ny gaboraraka. Rehefa manana finiavana hiantsena any amin’ny ara-dalàna ny olona foana ho azy io. Tsy fantatry ny olona akory hoe tsy mety ny ataony, izy ihany no fantany. Samy maka ho azy ny Malagasy dia izay no mahasarotra an'ilay hoe miara-mientana. Efa mba navotan'ny Barea aloha iny fa asa izay ho tohiny.